Iingcebiso ezi-5 zokuphucula ukuzithemba kwakho kwaye ube nobomi obunempilo | Amadoda aQinisekileyo
Iingcebiso zokuphucula ukuzithemba kwakho
Kukho ibinzana elithi "ulonwabo sisigqibo esaziwayo." Kubalulekile ukuba uthathe ifayile ye- isigqibo sokusebenzela ukuzithemba kwakho, ukuba uzive wonwabile ngawe nangobomi bakho.
Ukuzithemba okuphezulu akuthethi ukuba uzive ungcono kunabanye. Ngokuchasene noko, kubandakanya nokwazi amandla akho kunye nobuthathaka, ngaloo ndlela ukulawula ukubamkela kwaye uzive wonwabile ngawe.
1 Ezinye iingcebiso zokuphucula ukuzithemba kwakho
3 Yenza uqinisekiso
6 Konwabele okwangoku
Ezinye iingcebiso zokuphucula ukuzithemba kwakho
Yima phambi kwesipili kwaye ujonge umzimba wakho, ngaphandle kokuzigxeka. Jonga izinto ezikukhathazayo ngomzimba wakho kwaye ufumane izizathu zokuba kutheni ungazithandi. Mhlawumbi ababi njengokuba ucinga kwaye uyibaxa ingxaki.
Ukuba awukhululekanga buza ngamathuba okulungisa ezo zinto zincinci. Ngamanye amaxesha ukubamba izithambiso kunokunceda ukuphucula ukuzithemba kwakho. Phinda lo msebenzi kanye ngosuku.
Yenza Uluhlu lwezinto ofuna ukuziphumeza kwaye uthethe ngazo ngokungathi sele zisenzeka, ngale ndlela awuyi kubona zingenakufikeleleka. Umzekelo: "Ndingumntu olungileyo", "ndiyaphuma", "andoyiki ukuba ndim". Yikholwe okanye ungakholelwa, eli qhinga liya kukunceda kakhulu ekuphuculeni ukuzithemba kwakho kwaye kuyacetyiswa kakhulu ngoochwephesha bezengqondo.
Isicwangciso isiqhelo somthambo ukukhupha amandla kwaye ukugcina ingqondo yakho isempilweni akufuneki kube kudala. Ukuhamba imizuzu engama-30 okanye engama-45 yonke imihla kwanele. Kuya kufuneka uyikhaphe kunye nokutya okunesondlo okulingeneyo, ke oko kukunceda uzive ungcono malunga nokuzithemba nokuzithemba.
Enye indlela yokuphucula ukuzithemba kwakho kukuba ukudibana nabantu abatsha kwaye ulungile kubo. Ngale ndlela uyakudala imeko-bume eyenzelwe wena kunye nabo bakungqongileyo, usenza abanye bafune ukusondela kuwe ngenxa yamandla ovelayo.
Yeka ukurhalela elidlulileyo okanye ucinge ngendlela onokuyenza ngayo into ukuba yenzeke. Izinto ebomini zenzeka ngesizathu.
Imithombo yemifanekiso: Nedik / Gananci.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Iingcebiso zokuphucula ukuzithemba kwakho
Zeziphi izizathu onokuthi uthimbe ngazo?
Ngaba ukulandelelana 'kweKingmanman' kuya kuba yeyona bhanyabhanya inesitayile ngo-2017?